60 Seconds! Atomic Adventure 1.27.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.27.4 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း 60 Seconds! Atomic Adventure
60 Seconds! Atomic Adventure ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Ted တစ်ဦးတာဝန်ယူနိုင်ငံသားနှင့်တစ်မိသားစုသောသူကဲ့သို့, သင်သည်သင်၏ပျော်ရွှင်, ဆင်ခြေဖုံးလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန်အနည်းငယ်နှောင့်အယှက်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။ နျူကလီးယားကမ္ဘာပျက်။
60 သာစက္ကန့်နှင့်အတူသူ့မိသားစုနှင့်အသုံးဝင်သောရိက္ခာများရှာဖွေရေးအတွက်မိမိအိမျတစျဆငျ့တစ်ရူး, ပြင်းထန်သောနှင့်အရေးယူထုပ်ပိုး dash အတွက် Ted ကိုလမျးညှနျ, impact ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးသည်သင်တို့တဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မည် - အချိန်, သင့်သည်အလွန်ကိုယ်ပိုင်ပရိဘောဂ, သင် play တိုင်းအချိန်နှင့်အခြေခံမေးခွန်းတစ်ခုကိုကွဲပြားခြားနားရဲ့အိမ်သူအိမ်သား - အဘယ်အရာကိုသင်နှင့်အတူယူသူနောက်ကွယ်မှစွန့်ခွာဖို့?
အချိန်အတွက်ထပ်မံကျအမိုးအကာသို့ရောက်ရှိနှင့်အသက်ရှင်လျှက်သာအချုပ်အခြာဖြစ်၏။ ဘာပဲသင် scavenged နှင့်အကြင်သူသည်သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောသင့်ရဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရှင်သန်ရပ်တည်ရေးပုံပြင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်သင်တို့ကို surprising အတူကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအပုံပြင်များအပေါငျးတို့သကောင်းစွာအဆုံးသတ်ကြမည်နည်း သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ပင်ရိက္ခာအစားအစာနှင့်ရေ, သင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေလျက်, ခက်ခဲရွေးချယ်မှုရင်ဆိုင်ရနှင့်မြေယာထဲ့သို့စွ။
1950 ခုနှစ်တွင်သတ်မှတ်ထားဒီအနုမြူဗုံး, မှောင်မိုက်ဟာသ၌သင်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းပေါ်ကဆင်းကျဆင်းနေတဲ့နျူကလီးယား၏ suburbian အိပ်မက်ဆိုး။
မည်သည့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, သင်သည်သင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အိမ်သူအိမ်သားမှတဆင့်တစ်ဦးကို 60 စက္ကန့်အလုအယက်အတွက်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်လိုအပ်နှင့်မိသားစုဝင်များပါလိမ့်မယ်။
အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ ရုံ, မတရားပစ္စည်းများဖမ်းပြီးသင့်ရဲ့ရှင်သန်မှုစီစဉ်နှင့်အရေးပေါ်ထုတ်လွှင့်ကနေအထောက်အကူဖြစ်စေအကြံပေးချက်များအတိုင်းလိုက်နာမနေပါနဲ့!
သငျသညျသငျနှငျ့အတူယူဆောင်သမျှနှင့်အတူတစ်ဦးထပ်မံကျအမိုးအကာ၌တည်၏။ သငျသညျဘယ်နှစ်ယောက်ရက်ပေါင်းကြာရှည်လိမ့်မည်နည်း လူတိုင်းကထွက်အသက်ရှင်စေတော်မူမည်လော
Post-Apocalyptic လောကထောင့်မှသင်တို့ကိုတွန်းလာသောအခါဘာလုပ်ဖို့။ သငျသညျပွငျပမယ့်အန္တာရာယ်ကြမည်နည်း အနိုင်နိုင်ဆိုအစားအသောက် left သောအခါအဘယ်သူသည်ညစာမစားမပေးသလဲ? သင်တစ်ဦး Mutant ပာပ်ကျခြင်းနှင့်အတူကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသလဲ?
ARMv7 (နီယွန်သဟဇာတ) / Atom CPU ကို; OpenGL ES 2.0 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း
Deutsch, အင်္ဂလိပ်, Español, Français, Italiano, 日本語, Polski, Português BR, Pусский, 中文, 한국어
60 Seconds! Atomic Adventure အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
60 Seconds! Atomic Adventure အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
60 Seconds! Atomic Adventure အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
mr-robot-games စတိုး 6.63k 11.81M
60 Seconds! Atomic Adventure ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း 60 Seconds! Atomic Adventure အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.27.4
ထုတ်လုပ်သူ Robot Gentleman
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.robotgentleman.com/RobotGentlemanPrivacyPolicy.htm
လက်မှတ် SHA1: C1:7C:D6:BC:7B:8C:D8:1C:87:98:3A:8C:BA:2E:97:85:07:6A:CC:F4
အဖွဲ့အစည်း (O): Robot Gentleman
60 Seconds! Atomic Adventure APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ